Mpanamboatra sy mpamatsy andriamby misy lafiny roa | paravodilanitra
Miorina amin'ny fitaovana sy ny asany, ny andriamby misy lafiny roa dia antsoina koa hoe Neodymium mahery manarona mpamono jono manan-karena amin'ny fihazana harena. Izy io dia rafitra mavitrika manavao avy amin'ny andriamby Neodymium tsy fahita firy, tranga vy ary fehy maso tena ilaina. Ny endrika tsy manam-paharoa dia mahatonga ny andriamby tsotra manjono roa sosona mba hiteraka hery mahery vaika manana fampiharana midadasika toy ny jono andriamby, manantona, manainga ary maka ireo lahatsoratra misy vy be dia be.
Endri-javatra ho an'ny andriamby Double Sided
1. eyebolt vy tsy miovaova: ity famolavolana ity dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa ny farango manokana azy ireo hihaona amin'ny fampiharana manokana azy ireo.
2. Famatotra avo kokoa eo anelanelan'ny eyebolt sy ny magnet manarato: ny peratra fitehirizana dia mampihena ny loza ateraky ny fiverenan'ny masomaso sy ny fahaverezan'ny andriamby fanjonoana.
3. lafiny roa mahasarika: ity endrika ity dia manome avo roa heny ny faritra amin'ny hery andriamby, izay hahatonga ny andriamby fanjonoana roa sosona mitovy habe hampitombo ny fahafaha-mihaza ny harena.
Ahoana ny fomba hamokarana andriamby misy lafiny roa
1. R&D sy simulation: Araka ny fepetra sarotra takin'ny mpanjifa, tokony hiditra amin'ny fizotran'ny R&D sy simulation isika, mba hahitana ny filàna an-tsipiriany momba ny andriamby, ny endrika, ny habeny, ny firakotra sy ny naoty, ny vy ary ny habeny mifanaraka amin'izany. ny fomba fanangonana singa, sns. Ary avy eo ny santionany dia ilaina hamaranana ny endrika.
2. Manamboatra andriamby Neodymium: Mandritra ny fizotry ny andiana andriamby, ny teknolojia famokarana andriamby sy ny teknolojia famokarana dia tokony ho fehezina hentitra, izay saika manapa-kevitra ny hery mitazona sy ny kalitaon'ny andramena fanjonoana roa sosona. Indraindray, ny mari-pahaizana magnet dia tokony ho avo kokoa noho ny ambany kokoa toy ny N35, ka hahatratra ny hery avo kokoa sy habe kely kokoa.
3. Fisafidianana fitaovana vy sy fanodinam-by: ny fitaovan'ny vy vy dia zava-dehibe ihany koa amin'ny fitaomana ny hery misintona, satria ny fantsom-by dia tokony hanampy ny hery manerantany an'ny andriamby NdFeB tsy dia fahita mifantoka amin'ny afovoany ihany. Ankoatr'izay, ny trangam-by dia afaka miaro ny andriamby maharitra NdFeB tsy hikorontana na hamaky. Ny vy dia ambany vy.
4. Fenoy epoxy mainty: ny elanelana misy eo amin'ny andriamby NdFeB sy ny vy dia feno epoxy mainty, izay afaka manamboatra mafy ny andriamby Neodymium amin'ny vy vy, ary avy eo miaro ny kapila Neodymium kapila tsy hianjera ary avy eo manitatra ny fotoam-pivavahana.
1. Kalitao avo lenta: andriamby NdFeB, ny singa manan-danja indrindra dia novokarin'ny pabrikanay manokana, izay ahafahantsika manao kalitao andriamby voafehy.
2. Mahomby: Ny famokarana ao an-trano dia ahafahantsika miantoka ny andriamby manjono miaraka amina kalitao fa amin'ny vidiny ambany raha oharina amin'ny mpifaninana.
3. Fanaterana haingana: Maro ny vokatra semi vita amin'ny tahiry sy ny fahafaha-manamboatra ao an-trano mamela ny fandefasana andriamby fanjonoana ara-potoana.
4. Safidy bebe kokoa: Safidy mahazatra kokoa no azo ampiasaina. Ankoatr'izay, ny famokarana sy ny famokarana ao an-trano dia ahafahan'ny safidy manamboatra rafitra magnetika ho an'ny mpanjifa mifanentana. Afaka mihaona amin'ny fividianana fijanonana tokana tsotra izahay.
Data ara-teknika ho an'ny andriamby misy lafiny roa
Fizarana isa D H M Hery Lanja afa-karatsaka Temperature miasa indrindra
MG MG MG kg lbs g ° C ° F
Teo aloha: Neodymium Channel Magnet
Manaraka: Magnet amin'ny jono tokana